गर्भावस्थामा पेट किन दुख्छ ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»गर्भावस्थामा पेट किन दुख्छ ?
By रिता घिसिंग on २९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १०:५६ स्वास्थ्य/जीवनशैली
सामान्यतया गर्भावस्थामा पेट दुख्नु वा पेट जकडिनु सामान्य हो । पेटमा जम्मा भएको वायुका कारण पेट दुख्नसक्छ । तर पेट दुख्नुमा बायुसहित अन्य कारण पनि हुनसक्छन् । पेटमा रहेको शिशुका कारण गर्भको आकार बढ्ने गर्छ । जसका कारण पेटबाहेक अन्य अंग, मांसपेशी, आन्द्रामा पनि भार पर्छ र त्यसबाट पेट दुख्ने गर्छ ।